Chelsea oo indhaha ku heysa Donnarumma si uu u badalo Thibaut Courtois. | Gooldhalin
Chelsea oo indhaha ku heysa Donnarumma si uu u badalo Thibaut Courtois.
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay Xiiseyneyso goolhayaha AC Milan Gianluigi Donnarumma kazoo ay u arkaan inuu bedeli karo Thibaut Courtois hadii ciyaaryahanka reer Belgium uu ka tago Stamford Bridge xagaagaan.
Kooxda heysata horyaalka yurub ee Real Madrid ayaa si aad ah loola xiriirinayay inay dooneyso Courtois, kaasoo qandaraaskiisa haatan uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkaan 2019ka.
Chelsea ayaa dooneysa inay Courtois ku sii hayso Stamford Bridge, laakiin Corriere dello Sport ayaa soo warineysa inay u heystaan ​​Donnarmma inay bartilmaameed ka dhigtaan haddii ay ku guuldareystaan ​​inay heshiis la gaaraan goolhayahooda haatan.
Donnarumma ayaa doonayay inuu ka tago Milan xagaagii lasoo dhaafay, waxaana la filayaa inuu dib ugu soo laabto daaqada kala iibsiga marka uu furmo suuqa kala iibsiga, ka dib markii uu burburay xiriirka u dhaxeeya wakiilkiisa Mino Raiola iyo madaxda kooxda.
19 jirkaan heerka caalami ee dalka Italy ayaa u saftay kooxda Ac Milan 100 tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda koowaad, waxaana loo arkaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu Fiicaan xagga goolhayasha adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa tartan kala kulmi doonta saxiixa ciyaaryahankaan Paris Saint-Germain, kuwaas oo sidoo kale suuqa ugu jira goolhaye.
Dhanka kale, Milan ayaa la fahamsan yahay inay isha ku heyso saxiixa goolhayihii hore ee Liverpool Pepe Reina oo u ciyaara Napoli oo aay rabaan inay bedel uga dhigaan Donnarumma.